Huning House - 5 Bedrooms - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguWahyu
Indlu encinci entliziyweni yePurwokerto kwindawo yokuhlala ekhethekileyo (Bumi Arca Indah). Indlu enkulu ye-5BR yasekhaya enefenitshala ye-niche. Ixhotyiswe nge-AC kuwo onke amagumbi okulala, isifudumezi-manzi kwiBathroom nganye, i-intanethi enesantya esiphezulu, i-cable TV kunye nomatshini wokuhlamba.
Kumgama wokuhamba ukuya kwi-GOR Satria, indawo edlamkileyo enezokupheka, ezemidlalo, ezolonwabo kunye ne-UNSOED. Kwimizuzu eli-10 ukuya kwindawo enomtsalane edolophini, oko kukuthi. URita Supermall, u-Alun-Alun, kunye nento yokhenketho (iBaturaden)
I-Minimalist kunye nekhaya elinomhlobiso wevintage kunye nefenitshala
IBumi Arca Indah yindawo yokuhlala ekhethekileyo esembindini wePurwokerto. Ngokhuseleko lwe-24/7 kunye nenkqubo yesango elilodwa, i-mosque ngaphakathi kwe-complex, iipaki, indlela ebanzi, kufuphi nendawo yokupheka, kuye kwanikelwa kakhulu kule ngqungquthela.
Umbuki zindwendwe ngu- Wahyu
Siza kufumaneka 24/7 ukuphendula nayiphi na imibuzo.
Singathanda ukunxibelelana neendwendwe kwaye sinikeze naluphi na uncedo njengoko lufuneka.